Nkwụghachi iwu-Kitchen Faucets, Pot Filler Faucets, athlọ ịsa ahụ WOWWOW
Home / nkwụghachi iwu
Anyị nwere amụma nloghachi ụbọchị 30, nke pụtara na ị nwere ụbọchị 30 mgbe ị natasịrị ihe gị rịọ maka nlọghachi.
Iji tozuo maka nloghachi, ihe gị ga-adịrị n'otu ọnọdụ ị natara ya, amụtaghị ma ọ bụ ejighị ya, yana mkpado, na nkwakọ ngwaahịa mbụ ya. Also ga-achọ nnata ma ọ bụ ihe akaebe zụtara.
Iji malite nloghachi, ịnwere ike ịkpọtụrụ anyị na service@wowowfaucet.com. Ọ bụrụ na anara nloghachi gị, anyị ga-ezitere gị akara nnyefe, yana ntuziaka maka otu esi aga eziga ngwungwu gị. A gaghị anabata ihe zitere anyị n’ebughị ụzọ ịrịọ maka nlọghachi.
Can nwere ike ịkpọtụrụ anyị mgbe niile maka ajụjụ nloghachi ọ bụla na service@wowowfaucet.com.
Mmebi na mbipụta
Biko lelee usoro gị mgbe nnabata ma kpọtụrụ anyị ozugbo ọ bụrụ na ihe ahụ nwere ntụpọ, mebie ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnweta ihe na-ezighi ezi, ka anyị wee nwee ike nyochaa okwu a ma mee ka ọ dị mma.
Ewezuga / ihe ndị a na-enweghị ike ịlaghachi
Ufodu ihe adighi aghaghachite, dika ngwongwo emebi emebi (dika nri, ube ma obu osisi), ngwa ahia (dika iwu puru iche ma obu ihe ndi mmadu), na ngwongwo ndi mmadu (dika ihe ndi mara mma). Anyị anaghị anabata nlọghachi maka ihe ndị dị ize ndụ, ihe na-ere ọkụ, ma ọ bụ gas. Biko kpọtụrụ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ nchegbu banyere otu ihe gị.
Ọ dị nwute, anyị enweghị ike ịnabata nloghachi nke ire ma ọ bụ kaadị onyinye.
Fastzọ kachasị ọsọ iji hụ na ị nwetara ihe ịchọrọ bụ iweghachi ihe ị nwere, ma ozugbo a nabatara nloghachi ahụ, zụọ iche maka ihe ọhụrụ ahụ.
Anyị ga-agwa gị ozugbo anyị natara ma nyochaa nloghachi gị, ma mee ka ị mara ma nkwụghachi ahụ akwadoro ma ọ bụ na akwadoghị. Ọ bụrụ na akwadoro, ị ga-akwụghachi ụgwọ na mbụ ego ịkwụ ụgwọ gị. Biko cheta na enwere ike iwe oge maka ụlọ akụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ kaadị kredit gị iji hazie ma zipụ nkwụghachi ahụ.
Ọ bụrụ n ’ịlaghachi ahụ sitere n’aka ndị ahịa ya, onye ahịa ya kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka mbufe ya. Ego a kapịrị ọnụ kwesịrị ịdabere na ụlọ ọrụ awara awara ị họọrọ.
Ọ bụrụ na n’ihi ebumnuche anyị, ngwongwo ndị anabatara mebiri emebi ma ọ bụ na ha adịghị mma, a gaghịkwa achọrọ ndị ahịa ya iburu ego mbupu ahụ maka nke a.
Enweghị ụgwọ nkwụghachi ụgwọ maka ndị ahịa maka ịlaghachi ngwaahịa.